Acer TravelMate C310 Driver Download | Acer Driver ပံ့ပိုးမှု
ပင်မစာမျက်နှာ / TravelMate / Acer TravelMate C310 Driver Download
အားဖြင့် adminတွင်တင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 15, 2022
Acer TravelMate C310 Driver Download. မော်ဒယ်အမည်: TMC310. Equipped Witha14.1-inch screen and integrated optical drive, Acer TravelMate C310 has an impressive port selection compared to other tablets (usually smaller). They include VGA, S-Video, four FireWire pins, and three USB 2.0 ports (two side by side and one along the right edge). Headphone and microphone jack is on the back. The 4-in-1 card reader recognizes the Memory Stick / Memory Stick Pro, MultiMediaCard, and Secure Digital (SD) formats, and it also hasaType II PC Card slot.
မကြာခဏ, your operating-system can not be appropriate for previous drivers for notebook Acer TravelMate C310. ဒီအတွက်ကြောင့်, you may want to look up the listing of suitable os listed below before accessing the Acer TravelMate C310 driver below that content. ဘယ်သူပဲရှိပါစေ။ Acer TravelMate C310 must have contactedascenario where absolutely nothing happens following adding the new os. A damaged or lacking driver may have induced this. Current power disruptions, viruses or other computer problems can harm your Acer TravelMate C310 Driver.
We give the newest download hyperlinks including software packages, Driver Acer Predator G9-791 ခေတ်နောက်ကျနေသလား စစ်ဆေးရန် အခမဲ့စကင်န်ဖတ်နိုင်သည်, drivers သို့မဟုတ် firmware. When your Acer TravelMate C310 site loads, Please use tabs to search among several types of web content. Acquire and install drivers, application programs, Firmware, and manuals and access on line complex support methods and troubleshooting. Driver Acer TravelMate C310 could be saved without diverting to other internet sites. Clients who need to download drivers or information regarding Acer products. Due to regional industry variations across the planet, Acer’s products and services distributed and supported in each industry are different. ဖြေရှင်းချက်အားလုံး ဆက်သွယ်မှုများကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ။, inquiries and support are treated byalocal Acer Revenue Company in your country / ဒေသ. Do not overlook to offer feedback on improvements to the blog.
ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်
1. ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်> ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်> ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်> ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်> ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်.
2. ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် "ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။" ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်.
3. ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် 7ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် (".ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်" ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့် ".ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်") ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်> ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်> ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်. ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်.
4. ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်. ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်.
Acer TravelMate C310 သတ်မှတ်ချက်များ
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: Intel
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: Pentium M
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: 725
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: 1.60 GHz
ကက်ရှ်:2MB
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: 512 MB
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: DDR SDRAM
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: 80 GB
စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။: Ultra ATA/100 (ATA-6)
Optical Drive အမျိုးအစား: DVD-Writer
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား: 35.8 စင်တီမီတာ (14.1")
Display Screen အမျိုးအစား: LCD
မျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု: 1024 x 768
Digitizer: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
ဂရပ်ဖစ်ထိန်းချုပ်ရေး ထုတ်လုပ်သူ: Intel
ဂရပ်ဖစ် Memory သုံးစွဲနိုင်မှု: မျှဝေခဲ့သည်။
ကြိုးမဲ့ LAN: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
ကြိုးမဲ့ LAN စံနှုန်း: IEEE 802.11b/g
ဘလူးတုသ်: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
မိုဒမ်: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
မိုက်ခရိုဖုန်း: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
FireWire/i.LINK: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
S-Video: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
VGA: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
Network (RJ-45): စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
မိုဒမ် (RJ-11): စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
ကီးဘုတ်: စာအုပ်များ နှင့် အွန်လိုင်း အထူးပြု ပံ့ပိုးကူညီမှု ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရယူပါ။
ညွှန်ပြသည့် ကိရိယာ အမျိုးအစား: Stylus
ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ: Lithium Ion (Li-Ion)
Maximum Power Supply Wattage: 65 ဤဘလော့ဂ်အတွက် တိုးတက်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်ချက်ပေးရန် လျစ်လျူမရှုပါနှင့်
Windows XP (x၈၆ & x၆၄)
Windows Vista (x၈၆ & x၆၄)
ပြတင်းပေါက်7(x၈၆ & x၆၄)
ပြတင်းပေါက် 8 (x၈၆ & x၆၄)
ပြတင်းပေါက် 8.1 (x၈၆ & x၆၄)
ပြတင်းပေါက် 10 (x၈၆ & x၆၄)
အသံ အသံဒရိုက်ဘာ 5.10.0.5780 16.7 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဘလူးတုသ် Bluetooth Driver 4.0.1.2305 39.5 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
CardReader Card Reader Driver 1.0.2.1 2.8 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Chipset ပါ။ Chipset Driver 6.2.1.1001 2.9 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
FIR FIR Driver 1 2.4 KB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Lan LAN Driver 5.620.1202.2004 99.6 KB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
မိုဒမ် Modem Driver 7.20.0.0 1.2 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
မိုဒမ် Modem Driver 2.1.53 698.7 KB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
TabletButton Tablet Button Driver 1.1.1.0 1.0 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
TouchPad Touchpad Driver 7.13.2 5.1 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
VGA VGA Driver 72.5 23.7 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
VGA VGA Driver 6.14.10.4020 5.8 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ကြိုးမဲ့ LAN ကြိုးမဲ့ LAN Driver 9.0.1.9 16.3 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ကြိုးမဲ့ LAN ကြိုးမဲ့ LAN Driver 9.0.1.0 27.6 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
BIOS BIOS V1.11 929.3 KB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ePower Acer ePower စီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်လွှာ 1.5.6.259 7.7 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
NB Manager Acer NB Manager Application 1.0.34.52 9.4 MB ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Acer TravelMate 8100 Driver ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Acer TravelMate 5542 Driver ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
တွင်တင်ထားသည်။ TravelMateမှတ်သားထားသည်။ Acer TravelMate C310 Driver Download For windows 10, Acer TravelMate C310 Driver Download For windows 7, Acer TravelMate C310 Driver Download For windows 8, Acer TravelMate C310 Driver Download For windows 8.1, Acer TravelMate C310 Driver Download For windows Vista, Notebook Acer TravelMate C310 Driver, Notebook Acer TravelMate C310 Driver Download
အရင်ပို့စ် Acer TravelMate C110 Driver Download
နောက်ပို့စ် Acer TravelMate 5542 Driver ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Reply ထားခဲ့ပါ။ ပြန်ကြားချက်ကို ပယ်ဖျက်ပါ။
ဤဆိုက်သည် spam များကိုလျှော့ချရန် Akismet ကိုအသုံးပြုသည်။. သင့်မှတ်ချက်ဒေတာကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို လေ့လာပါ။.
လူကြိုက်များသော Post & မကြာမှီ
скачать видеодрайвер для асер-ехtensa-4420, acer ခရီးသွားဖော် 4070 ယာဉ်မောင်းဂရပ်ဖစ်ကတ်, acer zl1, acer 4000 ferrari ယာဉ်မောင်းများ, ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ကိရိယာ aser 1640 windows အတွက် 7, ဒေါင်းလုဒ်ဒရိုက်ဗာ vga acer aspire 1410 ပြတင်းပေါက် 10, Acer Aspire 1640 ယာဉ်မောင်းများ, Acer TP-SW5-012-17TK torrent ပေါ်ရှိ windows, acer travelmate 8481t ယာဉ်မောင်းများ, acer aspire sw3-013 ယာဉ်မောင်းများ, ယာဉ်မောင်း acer aspire ခလုတ်, Acer TMP255-M WIFI ယာဉ်မောင်း, acer ခရီးသွားဖော် 5730 ယာဉ်မောင်း wifi, acer travelmate p253-mg လက်ပ်တော့ပုံကြမ်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။, acer travelmate 8372t display drivers များ, ကျယ်ပြန့်သောသံမဏိ 7220 ဗီဒီယိုဒရိုက်ဗာများကိုအနိုင်ရ 7, acer switch တစ်ခု 10 drivers ကို download လုပ်ပါ။, driver pcmcia acer extensa ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ 4620, ကျယ်ပြန့်စွာဝင်ရောက်ခွင့် 4230 ဘလူးတုသ်ဒရိုက်ဗာ, acer ခရီးသွားဖော် 8473 windows အတွက် bios 10, acer ခရီးသွားဖော် 8473 ယာဉ်မောင်းများ, acer travelmatebယာဉ်မောင်းများ, acer travelmate b117 ယာဉ်မောင်းများ, အသံ driver acer extensa ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ 5010, acer travelmate b115 ယာဉ်မောင်းများ, တိုးချဲ့ vga acer ယာဉ်မောင်း 4630 ပြတင်းပေါက် 8, driver acer one z1402 windows764-နည်းနည်း, acer aspire e1 421 windows အတွက် drivers များ 10, acer omr060 ဒရိုင်ဘာ, windows အတွက် driver sounf7acer ခရီးသွားဖော်အတွက် 2420 အခမဲ့
ဤဝဘ်ဆိုဒ်သည် တရားဝင် Acer ဝဘ်ဆိုဒ်မဟုတ်ပါ။, ၎င်းသည် Acer Drivers နှင့် Acer Software နှင့် Acer ထုတ်ကုန်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် Acer Fan Website တစ်ခုဖြစ်သည်။. လွပ်လပ်စွာခံစားပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ပျက်နေသော လင့်ခ်များကို တွေ့ရှိပါက သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ရထားသော အကြောင်းအရာကို အစီရင်ခံလိုပါသည်။.
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ | ဝင်ငွေများ ငြင်းဆိုချက် | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | သတ်မှတ်ချက်များ | အကြောင်း
မူပိုင်ခွင့် © 2017 - 2022 | Acer Aspire Driver